Tian’Andriamanitra ho Namany Ianao
Tian’Andriamanitra ho namany ianao. Ianao ve efa mba nieritreritra hoe ho lasa naman’ilay Mpanjakan’izao rehetra izao? Nantsoina hoe sakaizan’Andriamanitra i Abrahama, lehilahy nahatoky fahiny. (Jakoba 2:23) Misy olon-kafa koa resahin’ny Baiboly hoe lasa naman’Andriamanitra, ka nahazo fitahiana be dia be. Ankehitriny, dia olona maro eran-tany no lasa naman’Andriamanitra. Afaka ny ho namany koa ianao.
Tsara kokoa ny minamana amin’Andriamanitra noho ny minamana amin’olona. Tsy mivadika amin’ny namany mihitsy Andriamanitra. (Hebreo 13:5) Tsara kokoa ny hoe naman’Andriamanitra, noho ny hoe manankarena be. Rehefa maty ny mpanankarena dia lasan’olona ny volany. Manana harena ara-panahy kosa izay naman’Andriamanitra, ary tsy misy afaka maka izany.—Matio 6:19.
Mety hisy olona hisakana anao tsy hianatra momba an’Andriamanitra. Mety ho namanao na havanao mihitsy izany. (Matio 10:36, 37) Raha misy maneso na mandrahona anao, dia eritrereto hoe: ‘Iza no tiako kokoa: Andriamanitra sa olona?’ Ahoana, ohatra, raha misy miteny aminao hoe aza misakafo intsony? Mazava ho azy fa tsy hanaiky ianao. Tsy maintsy misakafo mantsy ianao mba ho velona. Raha lasa naman’Andriamanitra anefa ianao, dia ho velona mandrakizay. Aza manaiky àry raha misy misakana anao tsy hianatra momba an’Andriamanitra!—Jaona 17:3.